Ahoana Ny Fomba Ahazoana Photoshop Free Sy Ara-Dalàna - Ampidino Fitsapana Maimaim-Poana Photoshop
Photo Retouching Services > Retouching Blog > Malagasy Blog > Photoshop maimaim-poana
Fahazoan-dàlana: Free Trial Version
Mifanaraka: Mandresy / Mac
Photoshop Elemen: Mandresy / Mac
Ato amin'ity lahatsnaatra ity dia tiako ny milaza aminao ny fomba hahazoana Photoshop maimaimpoana. Hianaranao fomba 4 ara-dalàna hahazoana rindrambaiko Photoshop free amin'ny fanitsiana sary matihanina, ny fatiantoka lehibe sy ny loza ateraky ny piraty ary ny topy maso momba ireo safidy malalaka tsara indrindra ho an'ny Photoshop CC.
Tombontsoa Adobe Photoshop free
Easy hevitra ny sosona
Fitaovana famolavolana maro
Ampitomboy ny famahana ny sary
Endrika sary rehetra
Fampianarana sy plugins maimaimpoana maro
Tsara amin'ny fanaovana montage sary
Afaka mamnaona endrika 3D
Mandra-pahoviana aho no afaka mampiasa Photoshop Free?
Azonao atao ny mampiasa ny kinova Free Trial mandritra ny 7 andro hitsapana ireo fiasa rehetra teo aloha mividy Photoshop.
Ahoana no ahafahako mahazo kinova andrana amin'ny Photoshop CC?
Misintona sy misnaatra anarana amin'ny kaontinao ao amin'ny Creative Cloud, ary anaian'izany dia afaka misintona a Fitsarana maimaimpoana amin'ny Photoshop kinova ary hafa maimaimpoana sy karama Fampiharana Photoshop.
Hofafana ve ilay programa anaian'ny fotoam-pitsarana?
Tsia. Hasaina hanalava ny famandrihanao ianao amin'ny fividianana iray amin'ireo famandrihana karama maromaro - Creative Cloud All Apps na App tokana. Anaian'ny fividiananao azy dia homena alalana mandeha ho azy ny Photoshop anaian'ny fandefasana azy.
Misy kinova feno amin'ilay programa ve?
Eny, ity dia rindrambaiko Photoshop feno tanteraka miaraka amin'ireo fiasa rehetra azo ampiasaina amin'ny famandrihana karama. Raha te-hihary vola ianao, dia mampnaisika anao hampiasa ny iray Fihenam-bidy amin'ny Adobe.
Azoko atao amin'ny fomba ofisialy ve ny mahazo ny andiany feno amin'ny Photoshop?
Azonao atao ny mampiasa ny Photoshop Online Free Editna, raiso maimaimpoana ny kinova CS2 folo taona lasa izay, Photoshop CC dia tsy misy raha tsy amin'ny fomba fitsapana na amin'ny famandrihana. Ankoatr'izay, afaka mihaino ny fampiharana fanovana sary maimaimpoana amin'ny finday avy amin'ny Adobe.
Ilaina ve ny misnaatra anarana amin'ny Creative Cloud?
Eny. Ankehitriny ny vokatra Adobe rehetra dia tsy misy raha tsy amin'ny Creative Cloud. Tsy azo atao ny asan'izy ireo misaraka, ary mila misnaatra anarana na amin'ny finday aza.
Fomba 3 hampiasana Photoshop en li
Ny fomba mnaa indrindra ahazoana Adobe Photoshop free, ary hitazomana ny fahaizany feno dia ny kinova andrana. Tsy maharitra izy io ary maharitra 7 andro monja anaian'ny fisnaatana anarana.
Misy fomba telo hafa hampiasana ity rindrambaiko ity maimaim-poana kokoa - ny misintona ny tsimbadika farany Photoshop CS2, ny tsipika Photoshop Elemen tsotsotra na ny fampiharana Photoshop Express finday.
Tombontsoa Photoshop CS2:
Fanovana tsy manimba
Fanovana sary 32-Bit HDR
Fikirakirana antontan-drakitra rakitra
Tantano ireo teboka very
Mpanitsy maso mena
Tsy maro ny olona mahalala, fa ny Adobe kosa manome ny programa CS2 rehetra, ary koa ny Adobe Acrobat 7 maimaim-poana. Fa aza faly loatra fa manana kinova taloha "somary" an'ny malaza ianao izao rindrambaiko fanovana sary.
Photoshop CS2 dia mihoatra ny 10 taona, ary arak'izany dia mijanona eto ny olana rehetra izay nesnaina tamin'ny kinova manaraka. Tsy misy fanohanana ireo endrika vaovao, ary, mifanaraka amin'izany, tsy misy asa miaraka amin'ny Creative Cloud.
Ny iray amin'ireo olana dia ny disclaimer an'i Adobe, noho izany ny nainasa dia tsy hanampy anao amin'ny fanitsiana izay tsy mety, izany hoe, tsy misy tohana avy amin'ny Adobe.
Tombontsoa azo avy amin'ny Photoshop Elemen:
Manohana ny fisie rehetra sary
Fanondroana tarehy sy geo-tag
Tnaolàlana manampy maimaim-poana
Adobe Photoshop Element dia nofnaonina ho an'ireo olona izay tsy mila fotoana malalaka rehetra amin'ny Photoshop, fa ny asany fototra fotsiny mba tsy hisy hahasakana ny fampiasana azy ireo. Izy io dia kely noho ny Instagram na VSCO, fa ambany noho ny Photoshop.
Azonao atao ny misintona 30 andro Photoshop Elemen maimaim-poana kinova andrana amin'ny famantaranandro amin'ny bokotra etsy ambony satria tsy ho hitanao izany ao amin'ny lisitry ny vokatra ao amin'ny tranokala Adobe. Tsy ao amin'ny Creative Cloud ihany koa io, ary tsy azoko ny antony.
Ny programa dia misy singa maro ao amin'ny Photoshop, ao anatin'izany ny RAW fakan-tsary feno ho an'ny fanitsiana loko. Amin'ny ankapobeny, ity safidy Photoshop maimaim-poana dia ampy hiara-miasa amin'ny fanovana sary voalohany - fanalefahana, fanitsiana loko, famerenana amin'ny laoniny ifotony.
Mifanaraka: iOS / Android / Windows
Faritra, lamina ary fiaviana maimaim-poana
Stikerika, tatoazy ary fomba fannaatra
Alefaso amin'ny Photoshop
Raha matetika ianao miasa amin'ny fitaovana finday na takelaka dia manana endrika Photoshop malalaka sy ofisialy tanteraka ianao - Adobe Photoshop Express. Tsy voafetra ara-potoana izy io ary miasa miaraka amin'ny Creative Cloud ary, ankoatr'izay, manana rahona manokana izy.
Na izany aza, tsy misy asan'ny retouching mety sy feno. Ny tsy fahalavnaarian'ny hoditra ihany no azonao atao, ary ny sasany hafa, raha tsy izany dia misy ny fanitsiana loko sy ny fametrahana ireo sivana.
Ny programa dia mitovy amin'ny Photoshop Express, fa tsy Photoshop feno, fa maimaim-poana ary tombony io.
Fa maninona ianao no tsy tokony hampiasa ny andiana Piraty Photoshop?
Betsaka ny vao manomboka, ary koa ireo amateurs, no alaim-panahy hampiasa tsy ara-dalàna ny Photoshop CC Rano Photoshop, satria mamonjy ny volan'izy ireo.
Na dia heveriko aza fa $ 9.99 / volana, izany hoe, $ 120 / taona dia mampihomehy fotsiny ho an'ny programa matanjaka toy ny Photoshop, indrindra ianao dia hahazo kinova fanampiny roa an'ny Lightroom sy 20GB fitehirizana rahona.
Mpaka sary maro no resy lahatra fa diso ny rafitry ny famandrihana, ary taloha kokoa dia tsara kokoa izany raha vao nividy azy ianao ary nanadino. Fa ny Photoshop CS6 izao dia mitentina maherin'ny $ 600, ary midika izany fa afaka mandoa 5 taona amin'ny Photoshop CC ianao.
Amin'ity indray mitnaaka ity dia hahazo folo heny ianao. Ny olona dia mandoa vola mitovy amin'ny Netflix na Apple Music amin'ny fahafinaretana, saingy tsy misy fiatraikany amin'ny asany izany, fialamboly fotsiny. Fa ny fandoavana zavatra manampy anao hahazo vola isan'andro dia tsia, tsia, nahoana?
Aza adino ny momba ny serivisy Creative Cloud sy Cloud
Tombony lehibe azo amin'ny fiaraha-miasa amin'ny lisansa Photoshop CC ny rindrambaiko rahona, ary koa ny fifindrana haingana avy Photoshop mankany Lightroom.
Tsy ara-dalàna ny fampiasana rindrambaiko piraty
Raha te hanohy ny nainasanao mandritra ny taona maro ianao, ary tsy mandoa onitra $ 1,500 amin'ny fampiasana programa tsy ara-dalàna, dia misy dikany ny mandoa $ 10 ho an'ny fisnaatana anarana isam-bolana Photoshop.
Tena matihanina ianao mba ho matotra amin'ny nainasao
Tsy misy olona hiasa matihanina amin'ny mpaka sary mampiasa tsy ara-dalàna triatra Photoshop rindrambaiko, ary raha tena zava-dehibe aminao ny asanao dia aza mampiasa rindrambaiko piraty.
Fanampiana avy amin'ny Community Communities and Producers izay hanohana anao
Raha miatrika olana ianao na Mihemotra ny Photoshop, afaka mitodika any amin'ny fanampiana Adobe foana ianao, izay ahazoanao fanampiana amin'ny famahana ny olanao. Ao amin'ny kinova piraty dia tsy azonao ampiasaina io fiasa io.
Ny kopian'ny piraty dia tsy mety ary tsy miasa araka ny kasaina hatao foana
Noho ny tsy fisian'ny fanavaozam-baovao sy ny famahana ny olana amin'ny asa dia hanenjika anao hatrany hatrany ny lesoka sy ny tsy fahombiazana, ka tsara kokoa ny manohitra ny fakam-panahy hahazo fisintomana maimaimpoana Photoshop.
Sarotra be ny mahita safidy Photoshop free tanteraka, satria ity rindrambaiko ity no programa fanovana sary matanjaka indrindra, ary manana vidiny ambany dia ambany izany raha oharina amin'ireo analogy karama.
Fa raha tsy olana amin'ny fitsipikao ny fampiasana programa Adobe, ary mila programa feno ianao maimaim-poana, dia azonao atao ny mampiasa programa toa ny Photoshop.
Rindrambaiko loharano misokatra
Plugins sy fampianarana momba ny fiofanana marobe
Famerenana sary lalina
Somary hafahafa ihany ny fitaovan'ny lahatsnaatra
Tsy misy fampitahana RAW fakan-tsary
Tsy misy fampitahana Photoshop hetsika
Raha te hanana vokatra saika matanjaka sy miasa toa ny Adobe Photoshop ianao, GIMP dia heverina ho iray amin'ireo safidy tsara indrindra. Tsy vitan'ny maimaim-poana izy io, fa manana rindrambaiko loharano misokatra ihany koa, izay ahafahan'ny mpampiasa marobe miasa amin'ny fanatsarana azy.
Misaotra an'izany fa plug-in sy add-on maro no voasnaatra ho an'ny GIMP, ary afaka miasa miaraka amin'ireo plug-in ho an'ny Adobe Photoshop koa izy io.
Tombony iray hafa amin'ny rindrambaiko fanovana sary GIMP ny fisehoany tamin'ny tapaky ny taona 90, ary nandritra ny taona maro, fampianarana sy tnaolàlana maimaimpoana ho an'ny fiarahana miasa miaraka aminy no nangonina tao amin'ny tranonkala.
Manohana ireo sosona miaraka amin'ireo fomba fampifangaroana
Tsara ho an'ny fanovana ifotony
Manohana karazana fisie am-polony
Toa lany andro ny interface an'ny mpampiasa
Tsy misy lesona fampianarana
Tsy misy safidy RAW fakan-tsary
Tsy misy fitaovana hanaovana famerenana hoditra
Paint.NET dia tetikasa tranainy nofnaonina ho solon'ny Microsoft Paint, saingy rehefa mandeha ny fotoana, dia nivadika ho matanjaka ary tamin'izany fotoana izany tsotra mpamoaka sary maimaimpoana, izay afaka mamaha ny ankamaroan'ny lahasa asa tsy miankina sy tsy miankina.
Ny Paint.NET dia manohana ny fiasa miaraka amin'ny sosona, saingy ilaina ny mampifandray plugin iray misaraka ho an'ny sarontava. Ny rindranasa dia manana safidin-tsivana maro karazana sy karazana fitaovana rehetra, saingy tsy dia lehibe toy ny an'ny GIMP analogie Photoshop free.
Paint.NET dia manana fifandraisana tsotra sy takatra, ary miasa haingana ny mpamoaka sary na dia amin'ny solosaina malemy aza.
Miasa amin'ny sehatra rehetra
Manohana ny sosona sy ny fomba fampifangaroana
Tsy dia marobe toy ny Photoshop
Tsy manohana karazana rakitra maro
Indraindray ianao dia mila manitsy ireo sary amin'ny solosaina izay tsy anananao alalana hametraka programa fotsiny, na mila programa azonao atao amin'ny fotoana rehetra ianao amin'ny solosaina rehetra misy Internet. Avy eo ny Mpanonta Pixlr safidy tsara.
Fampiharana web ity ary midika izany fa miasa mivantana ao amin'ny browser. Mpanonta Pixlr dia manohana ny ankamaroan'ireo manana mpanonta sary maimaimpoana hafa. Ny hany banga dia ny mandeha ho azy ny lahasa mahazatra, ary ny fahaizana mamnaona makrô.
Na eo aza izany, ity analogue an-tserasera Photoshop maimaim-poana ity dia afaka manao ny fandidiana amin'ny sary maro miaraka, ary miasa tanteraka amin'ny RAW.
Manohana endrika fisie hafa
Ny asa dia mamela zavatra maro irina
Very ny kalitao raha voatazona
Ny fifandraisan'ny safidy hafa Adobe Photoshop maimaim-poana dia ho takatra sy ho mnaa amin'ny fotoana mitovy ho an'ireo vao manomboka sy ho an'ireo mpampiasa mandroso. PhotoScape manohana tsy ny sosona ihany fa koa hetsika Photoshop maimaim-poana analogies ho an'ny asa haingana miaraka amina asa mahazatra.
Talohan'izay, ny programa dia shareware, mamela anao hitahiry sary amin'ny famahana endrika kely fotsiny. Fa tato ho ato izay, ny PhotoScape dia azo ampiasaina maimaim-poana tsy misy fetrany, ary raha irinao dia azonao atao ny manohana ilay tetikasa amin'ny fanomezana.
Azo ampiasaina amin'ny takelaka
Modely ho an'ny karazana tetikasa samihafa
Tsy misy fitaovana tantara
Ny fampidirana lahatsnaatra dia tsy tsara toy ny amin'ny Photoshop
Krita tsy fampitahana an-tsokosoko Photoshop editna malaza be mpitia. Tiako fa ny interface -na dia mitovy amin'ny Photoshop: ny baraovana dia minaina amin'ny fomba mitovy amin'izany.
Amin'ny toerana misy anao, misy lohahevitra maizina izy io (na izany aza azonao atao ny manamboatra azy raha tianao ny tsy hitovy) ary ny fitaovana mihitsy dia mitovy amin'ny Adobe. Misy ny fanohanana fitaovana, ary mety hanokatra vakiznao marobe ihany koa ianao, toy ny amin'ny Photoshop.
Maimaimpoana tanteraka izany, saingy misy kinova voaloa ho an'ny olona rehetra te-hanohana ny mpamnaona.
Fitaovana Photoshop Free
Mba hahamnaa kokoa ny fanovana sary, famolavolana na fanaovana sary dia azonao atao ny misintona ny hetsika Ps manaraka mba hahamnaa sy haingana kokoa ny fizotrany.
Ho fanampin'ny hetsika dia azonao atao ny misintona Free Photoshop Overlay, Kitapo Photoshop maimaim-poana, Bnaosy Photoshop maimaim-poana, sns.
Fampidinana maimaim-poana amin'ny Adobe Photoshop
Sal CS2 Maimaimpoana
Maimaimpoana ireo singa E Element
Ampiasao ny iray amin'ireto rohy ireto hahazoana fakana sary ara-dalàna an'ny Photoshop amin'ny findainao finday na laptop-nao.
Ny tombony lehibe amin'ny fanandramana maimaimpoana an'ny Adobe Photoshop dia ny fahafahanao mijery ny programa mandritra ny herinandro maimaim-poana sy ara-dalàna. Raha maka sary na retouching sary ianao dia Photoshop no programa malaza indrindra amin'izany. (mianatra bebe kokoa momba ny fomba ahazoana maimaimpoana ny Lightroom).
Noho io dia manana mpankafy an'arivony erak'izao tontolo izao izy, midika izany fa be dia be ny literatinaa, lesona maimaim-poana ary Fampianarana Photoshop avy amin'ny retoucher sary tsara indrindra, ary koa ny taranja isaky ny firenena.
Noho ny RAW fakan-tsary namboarina dia azonao atao ny manamboatra ny loko lehibe indrindra amin'ny sarinao, na ny retouching amin'ny sary tsotra na ny lalina, na koa ny manova ilay sary tanteraka mihoatra ny fanekena rehetra. Photoshop dia manohana ny endrika sary rehetra ary miasa miaraka amina rakitra manta tsara indrindra.
Tombony azo amin'ny Photoshop maimaim-poana